ठोरी र माडीका जनप्रतिनिधि भन्छन्– अयोध्याबारे बोलेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद ! अनुसन्धान हुन जरूरी – Sudarshan Khabar
ठोरी र माडीका जनप्रतिनिधि भन्छन्– अयोध्याबारे बोलेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद ! अनुसन्धान हुन जरूरी
‘विसं. २०३४ सालअघि ठोरी चितवन जिल्लामै अवस्थित थियो । जुनबेला ठोरी र माडीलाई पर्यायवाचीकै रूपमा लिने गरिन्थ्यो । सरकारी कामकाज पनि माडीबाटै हुने गथ्र्यो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले ठोरीमा रहेको सीता गुफालगायत राम–सीतासँग जोडिएका थुपै्र धार्मिक स्थलहरू ठोरी–माडीकै आसपासको क्षेत्रमा छन् ।
सोमेश्वर पहाडको किनारामा सीता गुफा अवस्थित छ । सोही पहाडको पश्चिमतर्फ माडीमा अयोध्या अर्थात् अयोध्यापुरी समेत छ । वाल्मीकि आश्रम पनि माडीमा अवस्थित छ । यी सबै धार्मिक क्षेत्र सोमेश्वर पहाडकै आसपासका क्षेत्रमा छन् । त्यसैले यसैलाई प्रमाणमा रूपमा लिन सकिन्छ । जुन कुरालाई भोलिका दिनमा खोज अनुसन्धानले पुष्टि गर्छ । त्यसैले यसको इतिहासविद् र अनुसन्धानकर्ताले काम अघिबढाउनु पर्छ ।’
धार्मिक सम्पदाहरूको प्रचार–प्रसार, संरक्षण र सम्बद्र्धनमा ध्यान दिन सकियो भने प्रदेश–२ को समग्र विकासमा टेवा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । महाभारत पर्वत श्रृङ्खलासँगै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रभन्दा उत्तरतर्फ सोमेश्वर पर्वतको पुछारमा अवस्थित सीता गुफा प्राकृतिक रूपले पनि आकर्षक देखिन्छ ।
जिल्ला सदरमुकाम वीरगंजदेखि झण्डै ६८ किलोमिटरको कच्ची सडक भएर त्यहाँ पुग्न सकिन्छ । चितवनको भरतपुरदेखि झण्डै ७० किलोमिटर दक्षिण पूर्व सडक मार्गबाट सो क्षेत्रमा पुग्न सकिन्छ ।
Online Khabar बाट साभार गरीएकाे